Emva kokuba ulethe imilomo yakho ngoncedo ngoncedo lwemveliso yokunyamekela, unamathela kwimboleko yazo. Akuyi kuba kuphela malunga nesicelo esifanelekileyo somlomo, kodwa kwakhona ukuba i-cosmetology yanamhlanje inika abafazi. Kwaye kunye neengcebiso zomculi ozenzayo ziya kunikwa: ukwakheka kwemilomo - kunokuba, njani, nini? Wonke umfazi kufuneka azi le nto.
Sinokuyipulela njani imilomo yethu?
Ukwakhiwa komlomo kuhlala kufana okufanayo: ii-oyile (umzekelo, i-avocado okanye i-castor), idayi (ikakhulukazi yokwenziwa), i-mastic (lanolin). Iipropati ze-lipstick nganye zichongiwe lilonke lala macala. Iimpeti zomlomo ziphezulu kwipesenti zedayi (malunga ne-10%), ngoko bawugubungela kakuhle umlomo kwaye bahlala ixesha elide. Kwi-gloss gloss share share of idayi i-5-8% ephantsi, kwaye isabelo samafutha siphezulu. Ngako oko, lubuchule kwaye lubala. Ipensela yomjikelezo iqulethwe ngomlomo oxinzelelwe entongeni enomxholo ophezulu wokubala umbala. Ukubunjwa kwamaphepha emilomo yanamhlanje kubandakanya iivithamini, iipolymers, izondlo kunye nezinto ezixhatshazelisayo - zikhusela umlomo kwiimpembelelo zangaphandle kunye ne-ultraviolet. I-lipstick emihle isetyenziswe kalula kwimilomo kwaye isicwebezele, ifumaneke kakuhle, kunye nomphezulu wayo kufuneka ube lula.
Ziziphi iimpawu zomlomo?
Iifomticks zinyusa, zondlobisayo, ziqhubekayo kwaye zinqabile, zinococeko (unyango) kunye ne-gloss gloss. Ukuthungula kuyanciphisa imilomo, kodwa kushiya iimpawu kwiingubo kwaye ngokukhawuleza kususwe. Izondlo zikhusela umlomo ukuba ungaphumeleli ngexesha lebusika (ngaphambi kokufaka isicelo kucetyiswa ukuba uphawule phambili umlomo wepilisi kunye nepensile ekhethekileyo, ayiyi kuvumela ukutshatyalaliswa komlomo). Ingozi eyona nto ingundoqo yimbonakalo yembali yezindebe. Ezinye i-lipsticks zinganamathela emlonyeni ngenxa ye-8-12 (eqhubekayo) kunye neeyure ezingama-24 (ezingapheliyo), kodwa imilomo eqhubekayo imisa imilomo kakhulu. Ziquka imijelo yemifuno kunye nezamaminerali ngokudibanisa neesters ezithintekayo. Emva kwemizuzu embalwa emva kwesicelo, i-ether iyaqhuma, kwaye ifilimu ekhanyayo kuphela ihlala emlonyeni.
Intsingiselo kwiziqholo zomlomo iipencilisi zomlomo ezingenamanzi. Lo mlomo wepencil "kwibhotile enye" ​​ubonisa umgca ococekileyo kwaye umbala umlomo kuyo nayiphi na umthunzi. Kwakukho umlungisi wombala we-lipstick, osebenza kwi-lipstick ngoncedo lwebrashi ekhethekileyo yomlomo - kwaye kufumaneka umthunzi omtsha. Unokulungisa utshintsho lombala ngokusebenzisa okungaphezulu okanye ngaphantsi kwe-corrector.
Iingcebiso eziphambili zomculi wokwenza izinto ekusebenziseni i-lipstick yiyo yonke into ofuna ukuyenza ukuze wenze njalo. Umyalelo ungolu hlobo lulandelayo:
1. Okokuqala - i-balm ye-moisturizing.
2. Ngokulandelayo, kufuneka ugcobe umlomo wakho ngokuchonga usebenzisa isiponji esikhethekileyo.
3. Emva koko, sebenzisa ipensela yomqhawulo ukuze uqonde ngokuthe ngqo umgca womlomo. Kukulungele ukuqala nge "V" phakathi komlomo ophezulu uze udwebe umgca kumacangca.
4. Wonke umlomo womlomo kufuneka uphethwe nge-lipstick, kodwa nge-brush lip.
Ukuba i-lipstick ibonakala ikhanya kakhulu kuwe, yongeza isiseko esincinane, i-kristin ye-kristal okanye i-powder kwi-brush, uze uhlabe emlonyeni.
Ukuba umlomo ungasasazi, sebenzisa i-cotton swab ukuba usebenzise ukulungiswa emlonyeni uze udibanise kunye nomtya, ngaphandle kokubamba yonke indawo yomlomo.
Izindebe zomlomo ziphupha zantonikazi. Ukunika umlomo umqulu obonakalayo kulula kakhulu, kufuneka nje usebenzise ngobuchule ukuhambisa umlomo. Gxininisa umbala phakathi komlomo, uze udibanise umlomo kwi-edge to make the contour look paler. Kwaye unokudibanisa imiyalezo emibili, usebenzise umnyama phakathi, kunye nokukhanya - emacaleni, ukuchukumisa ngobumninzi utshintsho.
Ukuba uthanda i-pearl lipsticks, khumbula ukuba bagxininisa zonke iimpazamo, ngelixa i-brissy light gloss, ngokuchaseneyo, iyayitshintsha. Kwaye i-tan eqinile, i-pearl lipstick yenza ubuso bunzima.
Ngalesi sihlandlo ngendlela ephothileyo, amathoni anomlilo womlomo: ukusuka kwipinki eluhlaza ukuya eluhlaza.
Ukuze wenze umlomo ukhohlise, abafazi baqalisa zonke iintlobo zobuqhinga. Omnye umntu ohlala kwii-advisory of makeup artists - imilenze yokwenza imveliso evela kwinkosi yangempela inokuphucula kakhulu imbonakalo yabo. Ewe, kunye nezobugcisa zanamhlanje zixhaphaza abasetyhini abanomnqweno wokungazinzanga.
Kungekudala, ubugcisa (eyenziwa kwi-salon yobuhle ngabachwephesha abanolwazi) luba yinkqubo eninzi eyaziwayo yokulungisa umlo womlomo kunye nokwandisa umthamo wabo. Ukwandisa umthamo emlonyeni kuqaliswe ukulungiswa okukhethekileyo - iziyobisi. Kukho iintlobo ezininzi zeemveliso ezifanayo, ezinye zazo zivela kwimvelo (umzekelo, Restylane, i-gilauroic acid, njl.). Benza ukususela kwinyanga nganye kwaye emva koko baphendule ngokupheleleyo, kwaye imilomo ibuyele "kwindawo yawo yokuqala".
Ukuba emva kweso sifo sexesha elifutshane uqinisekile ukuba umlomo ogqithiseleyo unxibekile, unokubhenela ekuncedeni "izidlo ezinde" ngokuzayo. Iindlela zolu hlobo ziquka "iArtekol", i-biogel nabanye. Kananjalo nazo zenziwe zidibeneyo kwaye zidibeneyo - ngokudibanisa izinto zendalo. "Gcina ifom" ukuya kwiminyaka emi-5.
Amancinci amancinci emilonyeni ayasuswa esebenzisa ii-injections ezifanayo "Restylane".
Ngaphambi kokuba utshintshe umlo womlomo, qiniseka ukuba udibana neengcali. Mhlawumbi unzima kakhulu? Ngendlela, i-cosmetologists, njengomthetho, musa ukulungisa ifom, ukuba umlomo mkhulu okanye, ngokuthe ngqo, ncinane. Ewe, ukuba isigqibo senziwe, lungele ulinde: umphumo uza kubonakala emva kweenkqubo ezininzi.
Nangona kunjalo, ukwakheka kakuhle kwemilomo kunokunceda ekulungiseni umlo. Musa ukulibala malunga neenzuzo zokubumba ngokusisigxina okanye ukubhala tattoo. Kuyenzeka ngale ndlela: umgca usetyenziselwa emlonyeni nge pencil, apho umatshini wet tattoo ngokucophelela angenele upende wemibala efunwayo kwinqanaba elincinci lesikhumba. Ukuba unqwenela, unokwenza umlomo wonke. Le nkqubo iyimfuneko kubokuqala kwabo bonke abanobumba obunzima bomlomo, akukho mlo obomvu okanye akukho mnqweno wokubamba ipensela kunye neentsimbi eziliqela ngezihlandlo ngosuku.
Ukuhlaziya isikhumba kunye nobuso bokutsha
Imithetho ebalulekileyo yokutya
Ukugqithisa inkukhu kunye netamatato kunye anyanisi
I-Casserole kunye namazambane kunye neekisi
NjengePeach: I-TOP-5 iyingozi kwimveliso yesikhumba
Khetha ehlobo ukuba luhlobo luni lomzimba
Ukunyamekela inja endala
Abazalwana baseStrugatsky, i-biography
Uqalekise "iNdlu-2": enye inxaxheba kwi-reality show yafunyanwa ifile
I-sauce yobisi kunye neparsley